Kenya iyo Raskamboni oo barakiciyay Qoysas badan |
Kenya iyo Raskamboni oo barakiciyay Qoysas badan
Wararka laga helayo Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Maleeshiyaadka Raaskambooni ay Qoysas u badan Caruur iyo Haween ka barakiciyeen Degmooyinka Ceel-Waaq iyo Garbahaarey ee Gobolka Gedo.
Qoysakan oo gaaraya tiro ahaan 130 ayaa waxaa Xooga looga saaray Ceel-Waaq iyo Garbahaarey kadib markii amar Culus uu ka soo baxay Xubno ak tirsan Maamulka KMG ah ee Juba gacantana ku haya Magaalada Kismaayo.
Waxaa la soo sheegayaa Dadkan ay soo eryeen Maleeshiyaadka Raaskambooni oo gabaad ka helaya kuwa Kenya ee AMISOM in ay gaareen Degaano hoostaga Gobolka Gedo iyadoona halkaasi ay ku haysato biyo la’aan baahsan.
Dadkan ayaa waxaa la sheegay in ay yihiin Qoysas ka so jeeda Ururka Al Shabaab waxaana lagu amaray in ay saga baxaan Gobolka Gedo balse amarkan ayaa waxaa uu ku soo baxay sida la tilmaamay hogaanka Sare ee Maamulka Raskambooni.
22 bishii Marso ee 2014 ayaa Qoysas badan oo lagu eedeeyay in xiriir ay la leeyihiin Dagaal yahano ka tirsan Ururka Al Shabaab laga ceyriyay Xaafado ka tirsan Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubda Hoose.